धन्दा लुकाउन लाइनमा बसेको प्रचार | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
धन्दा लुकाउन लाइनमा बसेको प्रचार
विष्टकै कारण दश हजार कामदारहरुको भविष्य अन्यौलमा
प्रकाशित मिति २० मंसिर २०७५, बिहीबार १५:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । मलेशियामा रोजगारीका लागि कामदार पठाउने विषयमा सरकारले कारबाही गरेका मेनपावर माफियाहरुसँग भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेका कारण चौतर्फी आलोचना खेपेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आफ्नो धन्दालाई गुपचुप बनाउन प्रचारको नयाँ शैली अपनाएका छन् ।
सरकारमै रहेका मन्त्री तथा विपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले समेत मन्त्री विष्टकै कारण दश हजार कामदारहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसबारेमा उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । तर, मंगलबार ट्राफिक नियम पालना गरेको भनेर विष्टले अन्धभक्तहरुलाई सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्न निर्देशन दिएको मन्त्री निकट स्रोतले बतायो ।
मंगलबार थापाथली चोकमा रातो बत्तीको जाममा बसिरहेको समयमा मन्त्री विष्टको गाडी देखिएको थियो । काठमाडौंमा अहिले ट्राफिक जाम ह्वात्तै बढेको छ, मन्त्री विष्ट मात्र होइन, धेरै मन्त्रीहरु जाममा पर्ने गरेका छन् । मन्त्री विष्ट जाममा बस्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, जाममा बसेको सामान्य विषयलाई लिएर मन्त्री विष्टको सामाजिक सञ्जालमा प्रचार हुँदा दश हजार कामदारहरुको भविष्यको बारेमा भने अन्यौल कायम छ ।
मलेशिया सरकारसँगको सम्झौतापछि कामदार पठाउन कागजी सम्झौता भएको छ । तर व्यवहारमा मन्त्रीकै कारण लागु भएको छैन । भेन्डर संस्था संचालन गर्दै आएका व्यक्तिलाई हटाएर बायोमेट्रिक, भीएलएन, आइएससीजस्ता संस्था आफ्नो हातमा पार्न श्रममन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारीलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने धुनमा गिरोह नै लागेको छ ।
जसका कारण अहिले मलेशिया रोजगारीका लागि भिसा लागेका कम्तिमा १० हजार कामदार जान पाएका छैनन् । मलेसिया पठाउने म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकले मन्त्री विष्टको यसैकारण आलोचना गरिरहेका छन् । श्रम स्वीकृति नलिदै भिसा अबधि सकियो भने कामदार दोहोरो खर्चको मारमा पर्ने बताइन्छ ।
यतिखेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका विषयमा नै सरकार विवादमा तानिएका बेला मलेशियाको विषयलाई पनि नेताहरूले उठाउन थालेका छन् । यति ठूलो आरोप लाग्दा मन्त्री विष्ट मौन छन् ।
स्रोतका अनुसार एक मेनपावर व्यबसायीको स्वार्थमा मन्त्री विष्ट लाग्दा कामदारहरुको भविष्य अन्यौलमा परेको हो । मलेशिया रोजगारीका क्रममा ठगी भएको भन्दै श्रममन्त्री विष्टले रोजगारीमा पठाउने विभिन्न संस्थाविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । भेन्डर संस्था भनेको रोजगारीमा पठाउने विभिन्न प्रकारका संस्था हुन् । बायोमेट्रिक स्वास्थ्य जाँच, भीएलएन, आइएससीलगायतका संस्थाले मलेशियामा कामदार पठाउँदै आएका थिए ।(यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक)
चालिस कटेसी कस्तो खानपान गर्ने ?
किशोरअवस्थालाई ‘ढुंगा पनि पचाउने’ उमेर भनिन्छ । जे खाएपनि पाचन प्रणालीले सजिलै पचाइदिन्छ । खाएको कुरा शरीरमा पोषक तत्वमा…
सम्भव होला पाँच वर्षमा सबैलाई स्वदेशमै रोजगारी ?
काठमाडौं । सरकारले अबको पाँच वर्षमा स्वदेशी युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा बिदेसिनु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको…
काठमाडाैँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारत भ्रमणमा भूपरिवेष्टित मुलुकले समुद्रको पहुँचका लागि प्राप्त गर्ने पारवहन सुविधाको अधिकार कार्यान्वयन प्रमुख…
संसद भवनमै आन्दोलन
काठमाडौं । अतिरिक्त भत्ता माग गर्दै संसदका कर्मचारीहरुले आन्दोलन तयारी गरेका छन् । उनीहरुले भत्ता नपाए पुस १ गतेदेखि…
चिन्नुहोस् प्रदेश प्रमुख को कस्ता ? चौकिदार देखि…
काठमाडौं । मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भएपछि संविधान कार्यान्वयनको चरण सुरु भएको छ । संविधानसभाबाट बनेको…
राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदीय दलको नेताका आकांक्षीबीच बाझाबाझ
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदीय दलको नेताका आकांक्षी अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर र सदस्य राजेन्द्र महतोलाई एकाआपसमा…
​नेकपा नेतृसँग मिलेर ‘सेनानी’को ठगी धन्दा 377 views